PSJTV | गुमनाम भए सिके राउत, यतिबेला के गर्दै छन् उनी?
पृथकतावादी धारको राजनीति त्यागेका डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको काठमाडौँ मित्रपार्कस्थित सम्पर्क कार्यालयमा ताला झुण्डिएको छ। दुई महिनादेखि सम्पर्क कार्यालय खुलेको छैन।
जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि सम्पर्क कार्यालय आसपास मात्रै होइन, काठमाडौँमा पनि देखिँदैनन्। कहाँ छन् त उनीहरु? डा.राउतसँगै जनमत पार्टीका सबै केन्द्रीय नेता जिल्ला दौडाहामा छन्।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवीन झाले लेखेको समाचारअनुसार पुस पहिलो सातादेखि फागुन दोस्रो सातासम्म तराई मधेशका ३० स्थानमा आमसभा गरेका छन्। यो साताभित्र थप चार ठाउँमा आमसभा गर्दैछन्।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसँगै उनले मधेशतिर ध्यान दिन थालेका थिए। राउत ०७१ भदौमा मोरङबाट पक्राउ परे, त्यतिखेर एकाएक चर्चामा आए। त्यसपछि पटकपटक पक्राउ पर्ने र रिहा हुने क्रम चल्यो। जेलमा रहेकै बेला सरकारसँग सम्झौता गरेका राउत त्यसपछि भने चर्चा बाहिर छन्, तराई मधेशका गाउँतिरै।
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको जारी बैठक आज शुक्रबार बस्दै छ । बैठक प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि बस्नेछ । आजको बैठकमा नेकपा अध्यक्षद्वयले ...